ကာလဒါနအလှူအဖြစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ကုသသ​ရေးစင်တာများသို့ အစားအသောက်များကို လှူဒါန်းလျက်ရှိတဲ့ Umm (ဟူမ်း) မွန်ရိုးရာစားသောက်ဆိုင် – YANGON STYLE
ကာလဒါနအလှူအဖြစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ကုသသ​ရေးစင်တာများသို့ အစားအသောက်များကို လှူဒါန်းလျက်ရှိတဲ့ Umm (ဟူမ်း) မွန်ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မွန်ရိုးရာအစားအစာတွေကို ရောင်းချပေးလျက်ရှိတဲ့ Presenter ကောင်းထက်ဇော် ရဲ့ UMM(ဟူမ်း) မွန်ရိုးရာစားသောက်ဆိုင် ကနေ အခုဆို ကာလဒါနအလှူအဖြစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ကုသသ​ရေးစင်တာများသို့ အစားအသောက်များကို စဥ◌်ဆက်မပြတ် လှူဒါန်းလျက်ရှိပါတယ်.
ထို့အတူ YRYEA – Yangon Region Young Entrepreneurs Association
ရဲ့ အစားအသောက်ပံ့ပိုးသူ ပါတနာ အနေဖြင့် လှူဒါန်လိုသူများကို အင်မတန်သက်သာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် အာဟာရပြည့်ဝသော မနက်စာ – နေ့လည်စာ- ညနေစာ ထမင်းဗူးများကိုပါ စီစဉ်လှူဒါန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ကုသသ​ရေးစင်တာများရှိကျန်းမာ​ရေးဝန်ထမ်းများအားအ​ထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွင် ကိုကောင်းထက်ဇော်၊ မဟန်နီ၊ မမေရူပါ၊ ကိုဘိုဘိုနိုင်၊ ကိုရန်လင်းစိုးနှင့် ကိုမင်းခိုင်မိသားစု မှ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နှင့် ၁၀ ရက်နေ့အတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၃၀,၀၀၀) တန်ဖိုးရှိသော UMM စားသောက်ဆိုင်၏ မွန်ရိုးရာ ထမင်းနဲ့ဟင်းတို့ဖြင့် စားဖွယ်အာဟာရများအား ပါဝင်လှုဒါန်း​ကျွေး​မွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှ ဆက်လက်ပြီး အခုဆို မြရိပ် မီဒီယာ၊ UAB bank မှ အမများ စသည့်အလှူရှင်များစွာက ဟူမ်းနှင့် တူတူလှူဒါန်းလျက်ရှိပါတယ်။
Umm (ဟူမ်း) မှာ နာမည်ကျော်တာကတော့ ကျန်းမာရေး မုန့်ဟင်းခါးပါ။ အချိုမှုန့် ၊ ငံပြာရည် ပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ ငါးအချိုအရသာနှင့် ချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မြေပဲဆီသန့်သန့်ပဲ အသုံးပြုထားပြီး ဒေသထွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်သာ စီမံချက်ပြုတ်ထားသော မွန်လက်ရာဟင်းပွဲပေါင်း အမျိုး(၂၀) ကျော်လောက်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အခုမှာယူလှူဒါန်းမှုများမှာ ဟူးမ်းရဲ့ menu အဖြစ်
နေ့လည်စာ နှင့် ညစာအတွက်ရွေးချယ်စရာများအဖြစ်
ကြက်ခပေါင်းကြော် + ထမင်းဖြူ
စိတ်ကြိုက် ရွေးစရာ ဟင်းပွဲများအဖြစ်
ပဲနီလေးဟင်းချို စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်လှူနိုင်စေဖို့ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Ummရဲ့ အထူးအတွဲ ထမင်းဘူးများအဖြစ်
ကြက်သစ်တိုသီးဟင်း + မုန်ညင်းကြော်+ ငပိကြော်+ ထမင်းဖြူ
ကြက်မွကြော်+ ကြက်ဥကြော်+ ပဲကုလားဟင်း+ထမင်းဖြူ
ကြက်မဆလာဟင်း+ ပဲပင်ပေါက်ကြော်+ ချဉ်ပေါင်ကြော်+ ထမင်းဖြူ
ကြက်သားသုပ်+ ခရမ်းသီးဟင်း+ မန်ကျည်းသီးကြော်+ ထမင်းဖြူ
ကြက်မရမ်းပြားဟင်း+ ပဲနီဟင်းချို+ ပန်းပွင့်ကြော်+ ထမင်းဖြူ
ကြက်ခပေါင်းဟင်း+ ပြောင်းဖူးသုတ်+ ငပိထောင်း+ ထမင်းဖြူ
ပုဇွန်ချိုကြော်+ ရုံပတီသီးစပ်ကြော်+ မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်းကြော်+ ထမင်းဖြူ
ငါးမွန်ဟင်း+ အစိမ်းကြော်+ ခရမ်းချဉ်ကြော်+ ထမင်းဖြူ
ငါးဖယ်မဆလာ+ ဂေါ်ရခါးသီးကြော်+ မန်ကျည်းသီးကြော်+ ထမင်းဖြူ
ငါးခြောက်အာလူးဘဲဥဟင်း+ မန်ကျည်းသီးကြော်+ ကန်စွန်းရွက်ကြော်+ ထမင်းဖြူ
ငပိထမင်းကြော်+ ကြက်ဥကြော်+ ကြက်သား+ ထမင်းဖြူ
ငပိသုပ်+ ပဲသီးကြော်+ ငါးမွန်ဟင်း+ ထမင်းဖြူ များကိုလည်း စီစဥ◌်ပေးထားတာကြောင့် အင်မတန် အဆင်ပြေပါတယ်.
တူတူလှူမယ်ဆိုရင်တော့ 095559799 ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
အရသာရှိ အဟာရပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်များကို ကာလဒါနပြုလုပ်နိုင်ဖို့အလို့ငှာ သတင်းကောင်းပေး နိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။